သူကြီးစစ်မယ့် ရွာတွင်းစာမေးပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူကြီးစစ်မယ့် ရွာတွင်းစာမေးပွဲ
Posted by black chaw on Sep 30, 2011 in Creative Writing, Think Different | 37 comments
BLACKCHAW ၏ မှတ်စုများ
လူတိုင်းမှားဘူးကြပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အမှားနဲ့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ အမှားပဲကွာတာပါ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မှားခဲ့ဘူးတာပါပဲ။ မကြာမကြာလည်း မှားတတ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက် စာမေးပွဲတစ်ခုကိုဖြေတဲ့အခါ အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှားရင်တောင်
ဂုဏ်ထူးပေးပါတယ်။ ၂၀ % မှားခွင့်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှန်အောင် ဖြေနိုင်ရင် ဂုဏ်ထူးရပါတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှားခွင့်ရှိနေပါသေးတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ၄၀ရာခိုင်နှုန်း မှန်အောင်ဖြေနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားဟာ စာမေးပွဲအောင်ပါသေးတယ်။
၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှန်အောင် မဖြေနိုင်ခဲ့ရင်တောင် ၃၅ လောက်မှန်ရင် မော်ရေးရှင်းနဲ့ အောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီတော့ အမှားကို ကြောက်နေဘို့ မလိုပါဘူး။
မှားမှာကြောက်နေရင် အမှန်နဲ့လည်း မနီးစပ်ပါဘူး။
ဘ၀မှာ ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မြင့်မားမားရှိသူတွေကတော့ အမှားနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့။
ဒါမှ ဘ၀စာမေးပွဲကြီးမှာ အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ အောင်မှာပေါ့။
မှားခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေကလည်း ဘ၀ပျက်လောက်အောင်တော့ မမှားအောင်ထိန်းရမှာပေါ့နော။
အလုပ်ခွင်မှာလည်း ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို အကဲဖြတ်နေရတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ
အမှတ်ပြည့်ရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေချည်းပဲလိုချင်လို့မရပါဘူး။ ဂုဏ်ထူးရတဲ့ ၀န်ထမ်း၊ အောင်ရုံအောင်တဲ့ဝန်ထမ်း၊
မော်ရေးရှင်းပေးမှ အောင်တဲ့ ၀န်ထမ်း စသည်ဖြင့်တွေ့ရမှာပါ။ ခွင့်လွှတ်သင့်တဲ့ အမှားမျိုးတွေကို ခွင့်လွှတ်ပြီး နောက်ဒီလိုအမှားမျိုး မကျူးလွန်အောင် လမ်းညွှန်ပေးရမှာပါ။
ရွာထဲမှာလည်း ရွာသူရွာသားခြင်း ရွာပြင်ထုတ်ဘို့တောင်းဆိုနေတာလေး မနေ့ကကြားမိပါတယ်။
ဆဲတော့ ဆဲတာပေါ့ဗျာ။ စေတနာနဲ့ဆဲတာဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဦးလေး တစ်ယောက်ဆို ဘာစကားကိုပြောပြော အဆဲလေးနဲ့မလွတ်ပါဘူး။
တစ်ခါက သူ့အိမ်မှာ ထမင်းသွားစားတော့ သူက ကျွန်တော့်ကိုအားရပါးရ စားစေချင်ပါတယ်။
သူပြောပုံကိုကြည့်ပါ။ ” ဟို ကိုယ် မေ ကိုယ် -ိုး လေး ထည့်စားတာမဟုတ်ဘူး။ ” တဲ့။
ဒါပေမယ့် စားစေချင်တဲ့ စေတနာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။
သူကြီးရေ ရွာသူရွာသားတွေကို စာမေးပွဲစစ်ကြည့်ပါလား။
၆၀ % လောက်တော့ မှားခွင့်ပေးရမယ်နော။
ဟဲဟဲ သူကြီး ကျွန်တော့်ကို စာမေးပွဲတော့ မချပါဘူးနော…။
မော်ရေးရှင်းလောက်နဲ့တော့ အောင်မှာပါဗျ နော (သူကြီးလေသံဖြင့်)။
ရွာသူရွာသားတွေကလည်း သူကြီးကို အမှတ်ဘယ်လောက်ပေးကြမှာလဲဗျ။
စာမေးပွဲတော့ မကျလောက်ပါဘူး နော (သူကြီးလေသံဖြင့်)။
မြန်မာပြည်က စာမေးပွဲဆိုရင်တော့ မော်ဒရေးရှင်းနဲ့ အောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် … သဂျီးတို့ ယူအက်စ်ကလို စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အကုန်ကျကုန်ပါလိမ့်မယ် … ကျွန်မ ဖြေခဲ့ဖူးတဲ့စာမေးပွဲတွေဆို အောင်မှတ် ၇၅ မို့လို့ အသဲအသန်ဖြေခဲ့တာတောင်မှ ကျခဲ့ဖူးပါသေးတယ် …
“ရွာထဲမှာလည်း ရွာသူရွာသားခြင်း ရွာပြင်ထုတ်ဘို့တောင်းဆိုနေတာလေး မနေ့ကကြားမိပါတယ်။”
မဟုတ်ဘူး blackchaw ရဲ့။
ထုတ်ရင်းထုတ်ရင် ကိုပုကပဲ သူကြီးကို ထုတ်မှာ။
သူကြီးကလဲ မကြာခဏ အစမ်းစာမေးပွဲစစ်ပါတယ်။
သူအမှတ်မပေးခင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂုဏ်ထူးရကုန်လို့ ……………….။
ကိုပု ကြပ်တာကို တကယ်ထင်သွားတဲ့သူကလည်း ရှိနေတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေကို အမှတ်လျှော့လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သဂျီးသိပါတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေရှိမှသာ သဂျီးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ရွာလုံးဘယ်သူမှမရှိပဲနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ သဂျီးလုပ်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲရှင်။ စာမေးပွဲစစ်ရင်တော့ အသက်ကြီးလာတော့ မှတ်ဥာဏ်က သိပ်မကောင်းတော့ အမှတ်က ရမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဘာသာတော့ ကိုယ်သိပါတယ်။
ဆဲတာမပါ ပဲနဲ့စေတနာ ပေါ်အောင်ရေးလို့မရ ဘူးလား ။ အထူးသဖြင့် အောက်ပိုင်း ကမတက် နိုင်တာ ။
စေတနာပါအောင် ရေးမယ်နော် ။
” ဘယ် မူးယစ်သေရည်ကို သောက်သုံးသူမဆို မစင် မစားဘူး ”
ဒီလို ရေးရင် ထိရောက် သလား ။
ဘ၀င်ကျ သလား ။
အာခံတွင်းတွေ့ သလား ။
ဒါဆို ထပ်ပြောဦးမယ် ။
” အသက် ၁၈ မပြည့်သေးသူများကို မရောင်းရ ”
” ကွမ်းတံတွေး မထွေးရ ”
” စီးကရက် သောက်ခြင်းသည် ကျမ်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်သည် ”
” ဒီနေရာတွင် အပေါ့ မသွားရ ”
” ဒီနေရာတွင် အမှိုက်မပြစ်ရ ”
” သန့် ရှင်းမှုဖြင့် ကူညီပါ ”
ဘယ် သကောင့်သားက လိုက်နာသလဲ….ဘယ် သကောင့်မ က လိုက်နာသလဲ ။
ဒါက သဘောတရားကို ပြောတာ ။
ဒဲ့ ပြောရမလား ။
ဆဲတာ မပါပဲနဲ့စေတနာ ပေါ်အောင်ရေးလို့ မရဘူးလား ဆိုတော့…..
မရဘူးလို့ ပဲ ပြောမယ် ။
မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်လို့။
ဆဲတာနဲ့မိုက်ရိုင်းတာနဲ့မတူဘူး ။
အတင်းပြောတာနဲ့အရှိအတိုင်းပြောတာလည်း မတူဘူး ။
ဆဲတိုင်းသာ ရွာပြင်ထုတ်ရမယ် ဆိုရင် နင်တို့ တွေ အားအားယားယား
ခံတွင်းတွေ့ နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အရင် ရွာပြင်ထုတ် ။
ဟေ့ ဒီမယ် စာရေးသူ။ရွာပြင်ထုတ်သလေးဘာလေး မပြောနဲ့ အုံးဟ။ရွာထဲထားဖို့ ကောင်းသလား၊မကောင်းဘူးလား
ဒီကောင်တွေရေး တဲ့ စာကိုမြင်အောင်ဖတ်ပါ။ပြီးမှ ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေါ့ကွာ။
ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ မူတစ်ခု စည်းကမ်းတစ်ခုကို မလုပ်နိုင်ဘဲ မလိုက်နာနိုင်ဘဲနဲ့တော့် ဘာမှမလုပ်သင့်ဘူး။
အင်္ဂလိပ် စနစ်မှာတော့ ၄၀သည် အောင်မှတ်၊ ၇၅ကျော်ရင် ခရက်ဒစ်၊ ၈၀ကျော်ရင်လားမသိဘူး ဂုဏ်ထူးလို့ သတ်မှတ်တာ ဗြိတိသျှကောင်စီ ဒီပလိုမာ စာမေးပွဲတွေမှာ တွေ့ဖူးတယ်။
၉၇-၁၀၀ အေပလပ်စ် ၉၄- ၉၆ အေ (Graduate Average Point GPA- 3.6 to 4.0)
၉၀- ၉၃ အေမိုင်းနပ်စ် (Graduate Average Point GPA- 3.4 to 3.5)
၈၈- ၈၉ ဘီပလပ်စ် (Graduate Average Point GPA- 3.3)
၈၆-၈၇ ဘီ (Graduate Average Point GPA- 3.0)
၈၃-၈၅ ဘီမိုင်းနပ်စ် (Graduate Average Point GPA- 2.7 to 2.9)
၈၀-၈၂ စီပလပ်စ်(Graduate Average Point GPA- below 2.70)
၇၈-၇၉ စီ(Graduate Average Point GPA- below 2.70)
၇၅-၇၇ စီမိုင်းနက်စ် (Graduate Average Point GPA- 2.0)
၇၄ ဒီ (Graduate Average Point GPA- 2.0)
ကျရှုံး အက်ဖ် ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ဘီအောက်ကျရင် ပျမ်းမျှထက် နိမ့်တယ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ ဘွဲ့လွန်အတန်းမှာဆို အဆင့်မမှီဆိုပြီး ဒီကရီထုတ်မပေးဘူး။ ခက်တာက ရမှတ်မကြိုက်လို့ ပြန်ဖြေချင်လည်း မရဘူး။ ကျရင်တော့ ပြန်ဖြေခွင့် ရှိမယ်ထင်တယ်။ အကျထက် စီတို့ ဒီတို့ ပေးတာများတယ်။
တကျောင်းနဲ့တကျောင်း သတ်မှတ်ချက် အနည်းငယ်စီ ကွာနိုင်ပါသည်။
C+ = အချိုရည်
A+ = ?
အဟမ်း . (ဖားပါတော့မည်)
ဖမ်းချုပ် ထောင်ချ အလုပ်ကိုဝါသနာထုံသူများ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်တရားစီရင်ရေး သို့ ဝင်ကြပါရန်
အဟမ်း . ( ဆက်၍ဖားသည်)
ကိုယ့်မြင်းကိုယ်စိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် လုပ်ချင်နေသူများ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဆိုဒ် တည်
ထောင်ကြ၍ အထက်ပါ အရေးယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြပါရန်
အဟိ . (အဖားလွန်၍ ပြေးပေါက်မှားရပါတော့မည်)
မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေရဲ့ စာမေးပွဲအမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးရေးထားတာပါဗျာ။
အင်္ဂလိပ်တို့ အမေရိကန်တို့က ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးပါတယ်ဗျာ။ မလုပ်ပါနဲ့။
စာမေးပွဲဆိုတဲ့ အသံ မကြားချင်တာ ဟိုး ငယ်ငယ် ကျောင်းတက်တုန်းကတည်းက
ရွာပြင် မထုတ်ခိုင်းပါ ။
ဆဲစာကိုသာ ဖျက်ပစ်ရန် တောင်း ဆိုခြင်းပါ။
ဟော .. blackchaw တို့က ဒီ အပေါ်မှာ စာရေးပြီး ပွိုင့်တွေ ယူသွား ပြီ။ Blackchaw က တရုတ်လားဟင်..
ပိုက်ဆံ အရှာတော်လို့ …ဟား ဟား ..
ဆဲစာ များကိုဖျက်ခြင်း ၊ လူနာမည်များကို မိုက်ရိုင်းစွာ ဖေါ်ပြခြင်း တို့ကို ဖျက်ပစ်သင့်ပါသည်။
သကြီးစာလေးဖတ်ရတော့ သြော် တကယ့်သကြီးပီသပေတယ်လို့ သတ်မှတ်မိပါသဗျား၊ အကြံပေးသူရေးသူ
အားလုံး mandalay gazette ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ရေစက်ဆုံကြရတာပါ၊ သူ့အမြင်/ကိုယ့်အမြင် ရင်ထဲရှိ
တာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှီကြတာကောင်းပါတယ်၊ သို့ကလိုရွာသူရွာသားချင်းမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါပြီ၊ သည်
ကျုပ်အပါအ၀င်- ရွာသူ/ရွာသားအားလုံးအပေါ်မှာ ဒါဟာ တာဝန်တစ်ခုပါဗျား။ ခုမှဝင်လာတဲ့ ba gyi လူတွင်
ကျယ် ၀င်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ သည်ရွာသားတွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် သည်ရွာထဲကို ရောက်လာ ရတဲ့ ကျေးဇူးကို ၀င်အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဗျား။
“ဟော .. blackchaw တို့က ဒီ အပေါ်မှာ စာရေးပြီး ပွိုင့်တွေ ယူသွား ပြီ။ Blackchaw က တရုတ်လားဟင်..
ပိုက်ဆံ အရှာတော်လို့ …ဟား ဟား ..”
ဘာတွေလဲဟ htoosan ရ။
”ရွာထဲမှာနေရင်တော့ဖြင့် အနည်းဆုံး ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ဝေဖန်ခံရဲတဲ့ သတ္တိ ရှိဘို့တော့ လိုပါလိမ့်မည်။ ”
လို့ ရေးခဲ့သေးတယ်။ မင်းကွန်းမန့်ကို သေချာဖတ်ကြည့်ပါဦးဟ။
ငါ့စာကိုဝေဖန်ထားတာ တစ်ခုမှ မပါပါလားကွ။
အပေါ်မှာ ငါဝင်မန်းထားတာကလည်း ကြောင်ကြီးက အင်္ဂလိပ်စံနစ်တွေ အမေရိကန်စံနစ်တွေ လုပ်နေလို့
ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ကွန်းမန့်ပေးသူများအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးရမည် ဆိုတဲ့အတွက် ပြန်ဆွေးနွေးတာပါ။
ပိုက်ဆံအရှာတော်လို့ လို့ပြောရအောင်လည်း ငါ မန်းဂဇက်မှာ စာရေးတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။
မင်းပြောတဲ့ ပွိုင့် ၃၀၀၀ မပြည့်သေးပါဘူးကွ။ ငါ့ကွန်မန်းတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အလကား အရည်မရ အဖတ်မရ လျှောက်မန်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွ။
ငါတင်ထားတာ ဒီပို့စ်နဲ့မှ ၂၀ ပဲရှိပါသေးတယ်။ တစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းမှာနော်။
မင်း BLACKCHAW ကိုမျက်စိနောက်နေတယ်ထင်တယ်။
ဂျော်နီအောင်ဘုက ဆဲပေမယ့် မင်းတို့လို မမိုက်ရိုင်းပါဘူး။
ငါ့အရင်ပို့စ်တစ်ခုတုန်းကလည်း မင်း ၀င်မန်းသေးတယ်။
ဟုတ်တယ် မေးလို့မရဘူး.. ခင်ဗျားမသိဘူးလား ..
ဟိုတလောက ဟိုဟာနားမှာ ဟိုတစ်ယောက်က ဟိုမြို့ သွားတဲ့ ဟိုကားလိုင်းမှာ မေးလို့ ကား ဟိုဟာဖြစ်လို့ဆိုပြီး ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ ဟိုနှစ်ယောက် ဟိုလိုဖြစ်ဆိုဘဲ .
လူကြီးတွေပြောတာဘဲဗျ . ဒါကြောင့်မမေးနဲ့။
မင်းတို့က နည်းနည်းကဲလာလို့ ပြန်ပြောနေရပြီ။ ငါရေးတဲ့စာကို ကြိုက်သလိုဝေဖန်ကွာ။ ငါလက်ခံတယ်။
ကျွန်တော် စာရေးညံ့တာပါ။ ကျွန်တော် နောက်တာ လွန်သွားတယ်ဆို ရင် sorry ပါ.. အဓိပ္မါယ် ပေါ်အောင် မရေးတတ်တာပါ..
“ဟော .. blackchaw တို့က ဒီ အပေါ်မှာ စာရေးပြီး ပွိုင့်တွေ ယူသွား ပြီ။”
ဆို တာ ရွာထဲမှာ ဖြစ်ပျက်လေး ကို blackchaw က ၊စာမေးပွဲနဲ့ နှိင်းယှဉ်ပြီး လှလှပပ လေး ချပြသွားလို့ ကျွန်တော် blackchaw ကို ချီးကျူးလိုက်တာပါ။ စိတ်ရင်းအမှန်ပါ၊
“Blackchaw က တရုတ်လားဟင်..
ပိုက်ဆံ အရှာတော်လို့ …ဟား ဟား .. ” ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်တွေ တော်ကြောင်း ၊ ကြိုးစားကြောင်းတို့ ဘယ်သူကတော့ တရုတ်ပါ စသဖြင့် ငြင်းခုံ သံတွေ ညံနေချိန် မို့ နောက်လိုက်တာပါ။
“ဟုတ်တယ် မေးလို့မရဘူး.. ခင်ဗျားမသိဘူးလား ..
လူကြီးတွေပြောတာဘဲဗျ . ဒါကြောင့်မမေးနဲ့။”
ဒါက ဘာမှ သေချာရေရွာစွာ မသိဘဲ ယုံကြည်လေ့ ရှိကြတဲ့ ကျွှန်တော်တို့တတွေကို သရော်လိုက်တာပါ..
ကိုblackchaw ကို လိုက် နှောက်ရှက်နေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်.. ဒီ စာ နှစ်ပုဒ်ဟာ ကို blackchaw တစ်ဦး ထဲရေးတာ ဆို တာလည်း သတိတောင်မထားမိကြောင်းပါ။
အခုလိုရေးသား သတိပေးတဲ့ အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြောဖို့ နဲနဲ ကျန်သွားလို့ ။ ဟား ဟား လို့ ရေးလိုက်တာက သူများတွေလို ပုံ လေး မတင်တတ်လို့ပါ။
နောက်ပြီး “မင်းတို့ လို့ ” ကို blackchaw ရေးထား တာ ။ ကျွန်တော် တစ်ဦးထဲပါ။ ကျွန်တော် ရေးနေတာ ကျွန်တော် တစ်ဦး မှလွဲရ်ျ ဘယ်သူမှလည်းမသိပါ။
ရန်တော့ မဖြစ်ကြပါနဲ့ နော်။ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ရင် ပေးလိုက်ပါ။တစ်ရွာထဲသားတွေ မဟုတ်လား။
ဆိုးပါ့ နာ့အဖြစ်က ဆိုးသလား အောက်မေ့မိတယ် နာ့ထက်ဆိုးသူတွေ ရှိနေပါပေါ့လားကွယ်တို့ ၊
blackchaw ပြောတော့လဲ ဟုတ်နေပြန်တာပဲ ၊
လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ ။
ကျူပ်ကတော. မဖြေဘူး…တစ်ခြားသူသတ်မှတ်မှ ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သိတာထက်…လူဆိုတာ ကိုယ်.ကိုကိုယ် ဘာလဲ သိတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် သူကြီးလဲ ဗမာစိတ်မပျောက်သေးဘူး (ဘက်လိုက်တတ်တယ်)
ရွာထဲသိပ်မ၀င်ဖြစ်တာနဲ့ ဖတ်လိုက်တော့ တော်တော် ပွဲကြမ်းနေကြတာပဲ..
မှတ်မှတ်ရရ လွန်ခဲ.တဲ့ ၂ နှစ်က MG လိပ်စာကိုရတာ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ( DVB)ကြည်.ရင်းနဲ.။ အဲဒိအချိန်တည်းက ၀င်ဖတ်နေတာ၊ အခုတော. ကိုယ်အမြင်လေးတွေကို ဆွေးနွေးချင်လို. မန်ဘာဝင်ထားတာ ၁ လခွဲ၊ ရေးပြီးတာ ၄ ပုဒ်။ Log In မလုပ်တာ ၁ လကျော်နေပြီ..ဒါပေမယ်. နေတိုင်းဝင်ဖတ်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ. ဆိုဒ်ရဲ. အ၇ည်အသွေးရော စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာရော ကျူပ်ကိုယ်တိုင်ကအစ ဖောက်တဲ.သူတွေများနေတယ်။ မျက်နှာပြောင်တိုက်တဲ.သူတွေများလာတ.ယ်.။ဘာတွေမှန်းမသိ ။ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သူကြီးလဲ စီနိယာတွေကိုမှမထိန်းနိူင်ပဲ နောက်လာမယ်.အသစ်တွေကို ထိန်းဖို.ကမလွယ်။ အသစ်တွေအတွက် အဟောင်းတွေက စံပြပဲ။ ဒါကလဲ ဒီဆိုဒ်ကို သံယောဇဉ်၇ှိလို. အပြုသဘောဆောင်တဲ. ဝေဖန်ခြင်းပါ။
ဆဲရေးတိုင်းထွာသော စကားကို လူမှု့ဝန်ကျင်၏ အသိမှတ်ပြုစကားဟူ၍ မဆိုထိုက်ပါ
ဆဲတဲ့အကျင့်၇ှိသူကိုလည်း လူယဉ်ကျေး မခေါ်ထိုက်ဘူးလို့
ငယ်အမည် သာမိညောင် ဟု အမည်ရသော
ချစ်စရာကောင်းခြင်းကြောင့် ချစ်စရာ ဟု အမည်၇သော
အချစ်များ၏ ဆရာဖြစ်သောကြောင့် ချစ်ဆရာ ဟု အမည်ရသော
ကျွန်တော် ချစ်စ/ဆရာ မှ အခိုင်အမာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါမည်
ဆဲခြင်းသည် ဆဲခြင်းပင်ဖြစ်ပါ၏ ထိုဆဲခြင်းအမှု့ကို ပြုသူတို့သည်
မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်၏ အမူအကျင့်နှင့်လည်း လွန်စွာဆန့်ကျင်ပြီး
( မဂ်ဖိုလ်မှ အချဉ်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျားဟူသော စကားနှင့်မဆက်စပ်ပါ )
ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ သွန်သင်ဆုံးမမှု့တွင်လည်း မပါရှိပေ
အခြားသော ဘာသာရေးဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးမများတွင်လည်း မပါရှိတန်ဟု ထင်မိပါပြီး
ယနေ့လွပ်လပ်သော နိုင်ငံတော်များ၏ ဥပဒေများတွင်လည်း
ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း အမှု့ကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ
ကျွန်တော် ချစ်စ/ဆရာ မှ အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
ရေးပြီးတော့လည်း မထူးပါဘူး ရှိပါစေတော့ ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့
မှောင့် အချစ်များ စူး ခဲ့ပလေ
ကိုယ်တုန့်ပြန်တာ နည်းနည်းပျင်းထန်သွားရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကလည်း HR Management သင်တန်းတက်ခဲ့တုန်းက မှတ်စုလေးတစ်ခုကို ပြန်ရှယ်တဲ့ သဘောပါ။
၀န်ထမ်းတွေကို မှားခွင့်လေးတော့ ပေးရမယ် ဆိုတာလေးကိုပါ။
ပို့စ်တင်ခါနီးမှ ချစ်စ/ဆရာ ရဲ့ ပို့စ် ကိုဖတ်မိပြီး လိုက်လည်းလိုက်တယ်ဆိုပြီး ဆွဲထည့်လိုက်တာပါ။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု ဘက်က ကိုယ်လိုက်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လေ့လာလိုက်တော့ သူတို့ အချင်းချင်းနောက်နေကြပ်နေကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရှယ်ချင်တဲ့ အကြောင်းလေးက လမ်းဘေးရောက်သွားပြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု ကိုပဲ
ဘာပြသနာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ အိုကေပါ။
ကျွန်တော် သူကြီး၏ စည်းကမ်းအရ Forum တွင်သွားရေးထားပါသည်။
ကျုပ်ကအမြှောက်သိပ်ကြိုက်တာ ဒါ့ကြောင့် အမြှောင့်ထုနည်းကျမ်းတွေကို
အပီလေ့လာနေတာ ( စကားချပ် )
ဟိုအပေါ်က တောက်တဲ့လိုလို ပက်ကျိလိုလို တရုပ်ကပ်ဖားကောင်
သာမိညောင် ( ခ ) ချစ်စ/ဆရာ ( သောက်ရေးထဲ ရှည်လိုက်တဲ့နာမည် ) ဆိုတဲ့လူပြောသလို
ဆဲတာကို လူမှု့ဝန်ကျင်ကလက်မခံတာတို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုပါ
( ဆဲရေးတိုင်းထွားခြင်း ကို လူမှု့ဝန်းကျင် နှင့် ဗုဒ္ဓတရားတော်ထည်းကနေဘယ်လောက်
ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်သလဲ .? )
ဆုံးမကြပါ ဝေဖန်ကြပါ အမှန်ကန်ဖြစ်ရင် မှတ်သားရသေးတာပ
ရုတ်တရက် အသံတွေ တိကနဲ တိတ်ဆိတ်သွားပြီး…
မျက်နှာလွှဲသူလွှဲ ၊ အောက်ငုံ့ကြည့်သူကြည့်ဖြင့် မသိမကြားလိုက်ဟန်ဆောင်ကြလျှက်…
သူကြီးအသစ်ဆိုရင်တော. သူကြီးကတော်ကို တင်မြှောက်ကြည်.ပါလား
ဒို.သူကြီးကတော. ရွာသားတွေကြောင်. ညစ်နေလောက်ပြီ
မဆဲဖူး တဲ့ လူ မရှိလောက်ဘူး ။
ကျုပ်လဲ ဆဲတယ် ။
ခင်ဗျားလဲ ဆဲတယ် ။
ဆဲတဲ့ အခါမှာ ဝေဒနာ ကြောင့် ဆဲတာလား ဝေဖြာချင်တာကြောင့် ဆဲတာလား ။
ဒီနေရာမှာ စေတနာကြောင့် ဆဲပါတယ် ဆိုတဲ့ ကောင်တွေကိုတော့ စာရင်း မသွင်းချင်ဘူး ။
အားလုံး နီးပါးသော အကောင်တွေက ပြောကြတယ် ။
စေတနာတွေ ၊ မေတ္တာတွေ ၊ ဂရုဏာတွေ ။
ဘယ့်နှယ် ….ဒီ အလုပ်လုပ်လို့ဒီ ပိုက်ဆံကို ယူနေကြတဲ့ အကောင်တွေ ပြောလိုက်တဲ့ စကားက …..
” လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ” ” ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါတယ် ” ” လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ”
နင့်မေကလွှား…..နင့်လုပ်စာ ငါစားထားလို့“…..ပေးလိုက်ပါတယ်..” ဆိုတဲ့ အနစ်နာခံ စကားမျိုး
ပြောချင်ရသလဲ ။ ဘယ် သကောင့်သားက အနစ်နာခံပေးလို့အဲသလို ဖောဖောသီသီ သုံးနေရသလဲ။
အပြင် အကြောင်းအရာကို သိပ်ပြီး များများ မတွေးပဲ ဒီထဲက ဟိုဟာလေး ဒီဟာလေး
ရွာထဲမှာ ဖင်ဘူးတောင်းထောင် ရှိခိုးရလောက်အောင် ကျေးဇူးရှင် တွေ များနေတယ် ။
ကျေးဇူးရှင်လို့ဆိုရာမှာ……
၁ ။ နင့်ကို လုပ်ပေးထားတယ်နော် …လို့ကြွေးကြော်တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ။
၂ ။ ငါ့ကြောင့် နင် ရပ်တည်နေလို့ ရတာ…. ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ။
၃ ။ ယူချင်ယူ မယူချင်နေ ငါကတော့ ပေးနေမှာပဲ…ဆိုတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ။
၄ ။ ယူစေချင်လို့ ကို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ပေးနေတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ။
၅ ။ ပေးသလိုလို ယူသလိုလို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ကျေးဇူးရှင် ။
မဆုံးနိုင်အောင် များပြားတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ အထဲမှာ ……..
ဟို ဂျီလိုလို မတ်လိုလို ဘုန်းကြီးလိုလို သီလရှင်လိုလို လူတစ်ယောက်….။
အဲဒီ တစ်ယောက် အကြောင်းကို အခုအချိန်အထိ သေချာ မသိသေးဘူး ။
သိရခက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ ။
ရေးကို ရေးဦးမယ် ။